न्यूयोर्कको ९/११ आक्रमणको धुवामा परेकाहरु अधिकांश क्यान्सरपीडित
न्यूयोर्क : ज्याकलिन फेब्रिलेट २६ वर्षकी थिइन्। सेप्टेम्बर ११, २००१ मा आतंककारीले दुई यात्रुवाहक विमान वर्ल्ड ट्रेड सेन्टरमा ठोक्काउदा । उनी सेन्टरभन्दा दुई “ब्लक” पर काम गरिरहेकी थिइन्।
घटनाको पन्ध्र वर्षपछि फेब्रिलेट तीन सन्तानकी आमा बनेकी छिन्। उनलाई मेटास्टेटिक क्यान्सर भएको छ। क्यान्सरको कारण वर्ल्ड ट्रेड सेन्टरमा विमान ठोक्किएर उत्पादन भएको विषाक्त खरानीको बादल हो।
त्यो खरानीले उनको शरिर पुरै ढाकेको थियो। “९/११ मा म त्यहाँ थिएँ। त्यसयता त्यहाँ प्रत्येक दिन काम गरेको वर्षौं भयो। यस्तो पनि हुनसक्छ भनेर हामीलाई कहिले बताइएन,” उनले भनिन् ।
रिचर्ड फाह्रर त्यतिबेला १९ वर्षका थिए। उनी घटना भएको क्षेत्रमा थिएनन्। तर सन् २००१ देखि २००३ सम्म दक्षिण म्यानह्याटनस्थित ट्विन टावर ध्वस्त भएको स्थानमा उनले “ल्यान्ड सर्भेयर”को रूपमा काम गरेका थिए। अठार महिनाअघि उनलाई “कोलोन क्यान्सर” भएको पत्ता लाग्यो। यो रोग प्रायः पाका उमेरका पुरूषलाई हुने गर्छ तर उनको परिवारमा कसैलाई पनि यस्तो भएको थिएन। ३७ वर्षका फाह्रर हालै मात्र पिता बनेका छन्।
वर्ल्ड ट्रेड सेन्टरमा आक्रमण हुँदा त्यहाँ बस्ने वा नजिकै काम गर्नेहरू बिरामी हुने संख्या बढ्दै गएको छ। उक्त आक्रमणको घटनामा करिब तीन हजारको ज्यान गएको थियो। हतारहतार गरि घटनास्थलमा पुग्ने उनीहरू आकस्मिक सेवाका कर्मचारी थिएनन्। न त “ग्राउण्ड जिरो” को भग्नावशेष सफाइ गर्नेहरू हुन्। तर उनीहरूको स्वास्थ्य पनि त्यसरी नै प्रभावित भएको छ।
९/११ को आज वार्षिकी हो । म्यानह्याटनको आकाशमा धेरै सातासम्म मँडारिएको विषाक्त बादलका कारण क्यान्सर वा अन्य गम्भीर प्रकारका रोगको शिकार भएका व्यक्तिको संख्या न्यूयोर्कमा बढ्दै गएको छ। ९/११ को आक्रमणले डायोक्सिन, एस्बिटोस र अन्य कार्सिनोजेनिक पदार्थ लगायतका रसायन हावामा उत्सर्जन गरेको थियो।
अग्नि नियन्त्रक र अन्य स्वयंसेवीले महिनौं लगाएर घटनास्थलको सरसफाइ गरेका थिए। पहिले प्रभावित हुने पनि उनीहरू नै थिए।
उनीहरूलाई क्यान्सर र कार्डियोभास्कुलरको रोग हुने जोखिम बढि भएको अध्ययनहरूले पत्ता लगाएका छन्। वर्ल्ड ट्रेड सेन्टर हेल्थ प्रोग्रामले उनीहरूमध्य दशौं हजारलाई क्यान्सर भएको पत्ता लगाएको छ।
यो वर्ष जुन महिनाको अन्त्यसम्म “फर्स्ट रेस्पोन्डर” नमानिएका २१ हजार मानिसलाई पनि प्रोग्राममा समावेश गरिएको छ। जुन २०१६ को तुलनामा यो संख्या दोब्बर बढि हो। तीमध्ये झण्डै चार हजारलाई क्यान्सर छ। धेरैजसोलाई प्रोस्टेट, स्तन र छालाको क्यान्सर भएको छ।
तीमध्ये ४४ वर्षीया फेब्रिलेट एक हुन्। शहरलाई चाँडोभन्दा चाँडो सामान्य अवस्थामा फर्काउनु नै त्यतिबेलाको लक्ष्य रहेको उनी स्मरण गर्छिन्। “केहि दिनमै मानिसहरू आफ्नो काममा फर्किएका थिए। तर यतिका वर्षपछि मानिसहरू मर्दैछन्,” ग्राउण्ड जिरो नजिकै बस्ने फेब्रिलेटले बताइन्।
फाह्रर पनि शहरका अधिकारीले घटनास्थल वरपरका स्थानीय र कार्यालयका कर्मचारीको सुरक्षाका लागि खासै केहि नगरेको गुनासो पोखे। “मेरी पत्नि सोध्छिन् के तिमीलाई आतकंकारीले क्यान्सर लगाए? म शतप्रतिशत त भन्न सक्दिनाँ तर जोखिमपूर्ण क्षेत्रमा प्रवेश गर्नुअघि वयस्कहरूको सुरक्षाका लागि धेरै प्रयास गरिएन भन्ने मलाई थाहा छ,” उनले भने।
क्यान्सरका प्रत्येक बिरामीको कारण ठ्याक्कै पत्ता लगाउनु असम्भव भएको स्वास्थ्यविद्हरू बताउँछन्। तर विषाक्त भग्नावशेषको “एक्सपोजर” र त्यसको दरबीच प्रष्ट सहसम्बन्ध भएको उनीहरू बताउँछन्।
न्यूयोर्कको अग्निनियन्त्रक विभागको चिफ मेडिकल अफिसर डेभिड प्रेजान्टले “एक्सपोज” हुनेलाई क्यान्सरको जोखिम १० देखि ३० प्रतिशत बढि रहेको विभिन्न अध्ययनहरूले देखाएको बताए। ती व्यक्तिको उमेर बढ्दै गएपछि प्रभावितहरूको संख्या अझै बढ्ने अनुमान गरिएको उनले बताए।
क्यान्सरको जोखिम उमेरसँग बढ्दै जान्छ। फोक्सो लगायतका केहि क्यान्सर विकसित हुन २० देखि ३० वर्षसम्म लाग्ने प्रेजान्टले बताए। यहि कारणले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले जुलाईमा एउटा विधेयकमा हस्ताक्षर गरे। पीडितहरूले क्षतिपूर्तिका लागि दाबी पेश गर्ने हदम्याद अब डिसेम्बर २०२० देखि बढेर २०९० सम्म पुर्‍याइएको छ।
भिक्टिम कम्पेनसेसन फन्डको ७.३ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको प्रारम्भिक बजेट सकिएपछि फेरि नियमित रूपमा विनियोजन गरिनेछ। प्रति बिरामी दुई लाख ४० हजार वा मृतकका लागि छ लाख ८२ हजार औसत क्षतिपूर्ति राखिएको छ।
Published Date: Wednesday, 11th September 07:06:21 AM
भारतको राजधानी दिल्ली प्रदुषणले निस्सासिदैं
उड्ने कार बनाउन बोइङ, एयरबसदेखि मोटर कम्पनी डेम्लर र टोयोटाबीच प्रतिस्पर्धा
नियमित सेक्सले स्वास्थ्यमा हुने ६ फाइदा
समुद्र अहिलेसम्मकै तातो
सेक्सले महिलाको महिनावारी ढिलो रोकिने
फेरिदो विश्व राजनीतिले जलवायु परिवर्तनमा के असर पर्ला?
चीनलाई टक्कर दिदै अमेरिकाको इन्टरनेसनल डिभेलोप्मेन्ट फाइनान्स एसियामा
बेलायतकी कान्छी सांसदको कथा
भारतमा प्रत्येक १५ मिनेटमा एउटी महिलाको बलात्कार
यस्तो छ एक अफगानी अनपढ बुबाको नाममा बनेको विद्यालयको कथा
जलवायु परिवर्तनको असरले सगरमाथामा घाँस उम्रिदैछ
यसरी घटाउँदैछ भारतले विवाहको खर्च
ट्वीटरले ट्वीटको प्रत्युत्तर दिनबाट रोक्ने